Ịgba Alụkwaghịm N'ala Igbo: Nwaanyị Dịka Osisi Na-Ebu Apa Mma
Ogoo Ifeka Department of Ngalaba Linquistics and Igbo Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, ỊgbarịamAnambra State
Alụkwaghịm bụ otu n'ime omenaala zuru Igbo ọnụ, ọ bụ ezie na ezinuụlọ ụmụ ha lụrụ di na nwunye anaghị atụ anya mgbasa ụmụ ha, kama na etu o sila dị, nsogbu dapụta n'ezinuụlọ wee na-achọ ka ọ ga-eri isi otu onye n'ime ha, ezinuụlọ abụọ ọ gbasatara akwado ụmụ ha ka ha gbasaa. Nchọcha a chọrọ igba n'anwụ ihe igba alụkwaghịm n'ala Igbo bụ na ọnọdụ nwaanyị gbara alụkwaghịm maọbụ a gbara alụkwaghịm. Site n'isiokwu a, a gbara mbọ were usoro nchọcha nkọwasi: site n'ajụjụ ọnụ na ịgụrụ ihe e derela banyere ọnọdụ a bụ alụkwaghịm na etu o sịrị dị ire n'ala Igbo. E lebara anya n'ihe ndị a, ihe na-ebute igba alụkwaghịm, usoro e si agba ya, nzipụta nwaanyị dịka onye na-ebụ apa mma alụkwaghịm, na usoro a gaghị igbaso wee gbochie alụkwaghịm n'ihi nsogbu ọ na-ebutere ọhanaeze. E nyochara ma zipụta nkọwa na echiche ndị mmadụ dị icheiche banyere alụkwaghịm, e zipụtara mgbanwe ụfọdụ pụtara ihe n'igba alụkwaghịm n'oge a. A chọpụtara na nsogbu dị ahụ na-ebute igba alụkwaghịm anaghị abụcha naanị nwaanyị maọbụ naanị nwoke na-akpata ya kama ọ bụ ihe ha abụọ nọrị kemgbe na-edi maọbụ na-anagide ka ọ ghara isere ha okwu ma-emechaa o tipuo, nke na ha abụọ maọbụ otu onye n'ime ha jubipụrụ isi na ya agaghị alụzị di maọbụ nwunye ahụ. N'oge a ka ezinuụlọ ga-ebido tinye aka ichọpụta etu a ga-esi mee ya bụ ihe ka nsogbu belata wee ruo mgbe isi ga-ajụ ndị nọ n'alụmdi ahụ oyi nke ọma. A chọpụtara ọtụtụ uru na ọghọm dikwa n'igba alụkwaghịm ma tụọ alo ihe a ghaghị ime na mmalite alumdi ka alụkwaghịm ghara ikpọ ezinuụlọ ọbụla ihu. A chọpụtara na mee elu mee ala na ọ bụ nwaanyị na-ebu apa mma alụkwaghịm niihi na ndị Igbo na-ahụta nwaanyị ahụ dịka onye isi erughị ala ma ncha. Nchọcha a ga-abara onye ọbụla uru ma nwoke ma nwaanyị karisia ndị nọ n'ọnọdụ alumdi. Ka onye ọbụla na-akwado ime nke a jụọ onwe ya ajụjụ ụfọdụ dịka: Aga m emenwu ihe dị n'ibiri onwe m? O weela m anya na alumdi a ga-aka nke ọchie mma? dgz. N'ikpeazụ, alụkwaghịm na-enyere ndị Igbo aka igbochi ọghọm dịka igbu mmadụ n'ebe alumdi enweghị ịhụnanya.
Nearly all societies in Igbo ethos see divorce as a delicate "accident" in marital relationships but in cases where the conflict between the couple is a about taking life or a threat to life, the two families involved will support their children to separate peacefully. This study aims to ụ-ray and eụpose entirely what divorce is in Igbo land and also the place of the woman who wishes the separation or who is divorced by her husband. Based on the topic of this study, this research work employed the descriptive method; with the aid of oral interviews, ọuestionnaires, consultation of teụt books from the librarywe delved into the following; the causes of divorce, the procedure of the "traditional" separation, analytical eụposition of the state of the woman in the business of divorce, portraying her as who bears the scares of divorce and ways to prevent further divorce cases. It was deduced that the problems or challenges in marriages which resulted to divorce has been there with the couple even earlier in their marriage but the couple were trying to subdue it until it could not hold water. At this point, the families involved will then give a go ahead and separate the couple for peace to reign, it was found that whatever might lead to divorce any case, the woman is always at the receiving end and bears the scandal alone.
The study will be very useful to all and sundry because whoever is tired of eụisting marriage both (the man and his wife) have to ask themselves ọuestions like thus; Can I take care of myself if I eventually get divorced? Am I fully convinced that the present marriage will be better than the former? Finally, divorce helps the Igbo people to prevent unforeseen evils: like killing oneself or killing another since there is no love in the union.
Site n'otuto na mmụba agụmagụ edereede n'Igbo na ọṅụ a na-enwe niihi nke a, enweghị mgbe ndị odee denyere n'agụmagụ ha iji zipụta nsirihụ ụmụ nwaanyị ka ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị n'abụghị iweda ha n'ala oge niile. N'agbanyeghị na a na-ekwu na ọ bụ ụmụnwoke nwe ụwa, na ọchịchị, nsọpụrụ na ugwu bụ naanị ha ga-enwe ya. Ụmụnwaanyị bụ ndị e chere na onweghị n'ihe a ga-agụnye ha, bụkwanụ ndị nne na nwunye, ha anaghị eri mperi n'ọrụ ọbụla obodo e tinyere ha n'aka dịka n'ọnọdụ ha n'ọchịchị ala ha niile. Ha na-achị ma na-akpa udo n'etiti ndị nwunyeedi ha ma n'ụmụọkpụ nke na ụmụnwoke apụghị ime ya maọbụ nwee ezi akọ iji menwuo ya.
Dịka nkwenye na omenaala ndị Igbo siri dị, ọrụ dịịrị ndị iyom maọbụ ụmụ nwaanyị bụ n'okirikiri ezinụụlọ ha. ọrụ ndị a bụ, ọrụ nwunye nye di ya, ọrụ nne na-eleta di na ụmụ ya anya nke ọma, site n'aka ha ka e si enweta mmụba nke mmadụ ka agbụrụ ghara ichi echi. Ndị nwaanyị na-alụ di na nne ha anaghị ama etu e siri akpa banyere alụmdi di ha maọbụ ebe a nọrọ kpaa nkata alụmdi ahụ. Na nwaanyị baara di ya uru maọbụ ihe ga-eme ka ọ nọrọ gawa n'ihu bụ na ọ mụtara ụmụ n'ezinụụlọ ọhụụ ya. Ọzọ, ọ bụghị naanị ịmụta nwa kama ịmụta ọtụtụ ụmụnwoke. ọ bụrụ na o nweghị nwa ncha, ụwa ya echuola niihi na ahụhụ nke ahụ na-eche ya site n'aka di ya na ụmụnne di ya. ọ bụ ọrụ nwaanyị ịchịkwa ezinụụlọ n'ụdị ọbụla ma ewepụ ịchị di ya. Dịka nwunye na nne, ọ bụ ọrụ dịịrị ya isi nri, kee nri, hụ na onye ọbụla riri nri n'oge kwesịrị ekwesị ma gbaa mbọ zachasịa ụlọ niile na mbara ezi be di ya. Ụmụ ya ndị nwaanyị nwere ike nyere ya aka n'ọrụ ndị a niile chere ya n'ihu, n'otu aka ahụ a na-azụ ha maka n'ọdịniihu nke ndụ ha dịka nwunye mmadụ.
Ụmụnwaayị sokwa na-azụ ezinụụlọ ha nri ma na-azụta ihe e ji akụ nri n'ụlọ ma mkpa ya dị. N'ịkọ ugbo, ha na-arụchasịị iruro, bọnyere ihe a kụrụ n'ubi aja n'ukwu, kụọ akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi. A bịa n'ọchịchị obodo ha nọ n'ime ya site n'otu ụmụ nwaanyị dị icheiche ha na-ekpokọba. N'ebe ahụ ka ha na-akpa udo n'etiti onwe ha ma chekwaa di otu ha n'aka ndị na-achọ imegide ha n'ụdị ọbụla.
N'agbanyeghị ọrụ a niile chere ụmụ nwaanyị n'ihu na n'ụdị ha siri bụrụ ọkaibe n'ije ozi ndịa niile ọnọdụ maọbụ ọkwa e dobere ha ka dị ala rie nne n'ebe ụmụnwoke nọ. N'oge a, mmepe nyeere ụmụ nwaanyị aka ịzọta onwe ha pụọ n'ọnọdụ nleda anya niihi na ha esoghị n'ihe a na-ekwu. Mmepe na agụmaakwụkwọ mere ka ụmụ nwaanyị nwee ugwu na nsọpụrụ, nye ha ikike, ikwupụta mmasị ha na iji uche ha chepụta ihe a ga-anabata n'obodo. Ịmaatụ, ekpemekpe ndị otu Kraịst mere ka nwaanyị nwee ike ịhọrọ onye ọ chọrọ ka ọ lụọ di na nwunye, anaghị eme ya eme n'ala Igbo niihi na nwaanyị o nweghị onwe ya. Agụmaakwụkwọ nyeere ha aka n'ịmụta ihe na ndụ, ma na-enwe ọrụaka n'obodo mepere emepe. N'ọnọdụ dị otu a, inwe ọrụ maọbụ ọrụaka emeela ka ụmụ nwaanyị na mgbe ha nọrị na-arụ ọrụ ezinụụlọ na ha na-aga ebe dị icheiche na-arụ ọrụ ha n'otu aka ahụ.
Mgbe nke a na-eme, ụmụnwoke na-eche na ha anaghị enwetazi nsọpụrụ n'aka ndị nwunye ha otu o kwesịrị. Nke a bụ na mmegbu ụmụ nwaanyị amarala ha ahụ, nke mere na egwu ụmụ nwaanyị inwere onwe ha ji ha aka. Mgbe ụfọdụ ụdị echiche a nwere ike butere di na nwunye nsogbu n'ezinụụlọ ha nke ga-abụ o tetụ aka a chọba ịgba alụkwaghịm.
Alụkwaghịm bụ mgbe mmadụ abụọ lụrụ di na nwunye kwụsịrị abụm di na nwunye. O nwere ike site n'aka nke nwoke maọbụ nke nwaanyị. Ka ha abụọ hụtara na alụmdi ha abụghịịzi etu ha tụrụ anya ma karịsịa mgbe ha enweghịzi ntụkwasị obi n'ebe ibe ha nọ. Ha na-anọzi ka ndi iro n'ezinụụlọ ha. Ndị ezinụụlọ ha na ụmụnna ha gbaa mbọ etu ike ha ha iji dozie okwu n'etiti ha ma o nweghị isi, a na-eme omenaala iji ketọọ ha abụọ tupu otu onye egbuo ọchụ n'ụlọ ha.
Gịnị bụ Alụkwaghịm?
Nwoke nọkatara chụlaa nwunye ya maọbụ nwaanyị nọkatara laa be nna ya wee sị na ọ gaghị alụzi, na nwaanyị ndị be ha welara ego nwoke mere n'isi ya abụghị otu. Di na nwunye ibike abụghị alụkwaghịm. ọ bụrụ na ha bikee, o nweghị ka ha ghara ịbụkwazi di na nwunye ọzọ niihi na mbike ahụ ruo oge nke nwaanyị nwụrụ, a ga-abịakwa lie ya na ngwuru be di ya. Mana ọ bụrụ na ha gbara alụkwaghịm n'usoro obodo ha si eme omenaala ịgba alụkwaghịm, o nweghị ka a ga-esi wee bịa lie nke nwaanyị na ngwuru nke nwoke ma ọ nwụọ.
Alụkwaghịm bụ isiokwu ọtụtụ mmadụ kwurula ihe banyere ya.
Brainy ọuote (2011) na-asị na "alụkwaghịm bụ mmeghasị nkwekọrịta alụmdi site n'aka ndị ụlọikpe maọbụ n'aka otu nwere ikike imeghasị nkwekọrịta alụmdi". Nkọwa a na-ezipụta na alụkwaghị bụ nkwụsị nke alụmdi nke iwu na omenaala kwadoro. Ndịiche alụkwaghịm na mbike di na nwunye bụ na iwu na omenaala akwadoghị mbike. Ịgba alụkwaghịm dịkwa iche na mbike maọbụ mbisa di na nwunye nke ndị ụlọikpe, ọkaiwu na omenaala kpebiri. Nke a, apụtaghị na alụmdi akwụsịla kpamkpam kama ọ pụtara na ndị ọkaiwu ekpebiele na di na nwunye ahụ nwere ike biiri onwe ha iche mana nke nwoke ga na-arụ ọrụ iweta ego dịịrị ya n'ebe nwunye ya nọ. Di na nwunye ahụ nwekwara ike mechaa birikwa n'otu ụlọ.
Ezeuko (1986) sị, "... ọ bụ enweghị mmekọrịta na nkwekọrịta nke dịbu n'etiti nwoke na nwaanyị jikọrọ onwe ha ọnụ dịka di na nwunye ma ha ebikwaghị n'otu ụlọ ugbua." Nkọwa a na-ezipụta na ndị bibu n'otu ụlọ kwụsị inwe mmekọrịta na nkwekọrịta dịka di na nwunye ọ bụrụ alụkwaghịm.
Ọzọ, ọ bụrụgodu na alụmdi ga-akwụsị, ọ bụghị naanị alụkwaghịm bụ ihe e nwere ike ime kama na di na nwunye nwekwara ike ibike. E nwere iwu dị icheiche kwadoro alụkwaghịm na mbike n'otu n'otu ma nwekwaa ihe dị iche na ha abụọ.
E nwere ụzọ atọ e nwere ike iji wee kwụsị alụmdi, dịka mbike nkịtị, mbike sitere n'aka ndị ọkaiwu na alụkwaghịm. Mbike nke nkịtị nwere ike chọọ ndụmọdụ n'aka ndị ọkaiwu mana alụkwaghịm bụ ebe e si n'usoro omenaala maọbụ ụlọikpe wee kewaa di na nwunye. Mbike nwere ike bute alụkwaghịm na ihe adịghị aṅaa na-emezi gaba n'ihu.
N'oge ochie, ịgba alụkwaghị bụ ihe siri ike ime eme n'alụmdi ma n'oge a, oke amamiihe na oke mmụta mere ndị mmadụ na-ewere alụmdi dịka ihe agaghị atụnye ndụ na ya. N'oge gboo, ọ bụkarị ndị nwoke na-agbakarị ụmụ nwaanyị alụkwaghịm mana nwoke maọbụ nwaanyị na-agba nwunye maọbụ di ya alụkwaghịm n'oge a.
Landis (1977) na-asị na "alụkwaghịm bụ ihe e ji doo agbata n'etiti di na nwunye nke mere ka alụmdi bie... alụkwaghịm na-emetụta ndị banyere n'ime ya n'ụzọ dị icheiche." Nkọwa ya na-ezipụta na nkebi ahụ nwere ike ọ gaghị edofọ ndị ahụ gbara alụkwaghịm ahụ.
Ihe na-akpata Alụkwaghịm n'ala Igbo
Anyị ga-eleba anya na ihe e chere na-akpata alụkwaghị, n'ala Igbo. A ga-eleba ya anya n'ụzọ atọ: Ihe na-eweta ịgba alụkwaghịm n'oge gboo, ihe na-eweta alụkwaghịm n'oge ugbua na ihe na-eweta ịgba alụkwaghịm n'usoro nke ofufe na nkwenye.
N'oge gboo, ma n'oge ugbua ma n'usoro ofufe bụsọ naanị enweghị nkwekọrịta na a ga-ebinwu ọzọ, dịka di na nwunye. Ọtụtụ ihe na-ebute nke a n'ụdị atọ ndị a bụ:
Ma nwoke ma nwaanyị zuo ohi ji, unere, ọkụkọ di maọbụ nwunye ya na ụmụ ya na-agba ya alụkwaghịm niihi ihe arụ a, o mere nye ezinụụlọ ha. ọ bụrụ nwaanyị ọ laa be nna ya ma ọ bụrụ nwoke ya na nwunye ya na ụmụ ya agaghị enwe mmekọ ọzọ wee ruo n'ọnwụ ya. A ga-akpụ onye ahụ n'ala n'ọtụtụ obodo n'ala Igbo tupu ọ nwụọ, a tụfuo ozu onye ahụ n'ọhịa n'oge gboo.
(ii) Ịkpa Nsi
Ma nwoke na nwaanyị karịsịa n'ebe nwaanyị nọ, ọ bụrụ na nwaanyị ahụ na-akpa nsi n'obodo, ndị be di ya ga-ezu ezu wee gbaa ya alụkwaghịm mgbe a chọpụtara na o gburu mmadụ (onye ụmụnne di ya) maọbụ di ya. Ma ọ bụrụ nwoke a ga-ekewa ya na nwunye ya n'otu aka ahụ ma mee ya onye amaghị n'ezinụụlọ ya na n'ụmụnne ya niile.
(iii) Ịwị Ara
Ara na-awị nwoke maọbụ nwaanyị, onye nke ọzọ ga-achọba ụzọ ịgba alụkwaghịm niihi na onye ara na onye anya doro anaghị anọkọ ma ya fọdụkkwa n'ụdị alụmdi. Ndị Igbo kwenyere na onye na-awị ara esila na mmadụ banye na mmụọ nke pụtara na ya na mmadụ ekwesịghị inwe mmekọ ọzọ niihi na olu ọ na-anụzi bụ ihe ndị mmụọ na-ekwu maọbụ kwuru. Onye ara nwere ike imebi ihe dị egwu n'ụlọ maọbụ kugbuo mmadụ. Nnukwu ahụhụ dịịrị ma nwoke maọbụ nwaanyị ya na onye ara bi n'ụlọ. ọ bụrụ na atụrụ ya ịga n'ụkwụ na n'aka nwoke maọbụ nwaanyị ahụ ga na-ebu nsị na amịrị ya. ọ bụrụ na-agwọkata ara ahụ ma o kweghị ngwọta, nwaanyị maọbụ nwoke ahụ takata ahụhụ a, obi jọọ ya njọ, o nwere ike ịhapụ onye ara ahụ nke pụtara na ha ekewaala.
N'eziokwu, nwoke maọbụ nwaanyị ara na-awị nwunye maọbụ di ya na-adị ahapụ ya, ọ bụrụ nwaanyị o nwere ike laa be nna ya ma ọ bụrụ nwoke nwaanyị aghara ya laa be nna ya. N'oge a e nwere ọgwụgwọ ara n'ụlọọgwụ ndị Bekee, ụfọdụ ndị ara ka a na-agwọtazi ma onye ahụ nwaa oko ya ọ bụrụ na o nweghị isi, ọ na-agba ya alụkwaghịm.
ụkọ ego maọbụ ịda ụbịam na-eweta alụkwaghịm. Ma nwaanyị alụrụ nwoke maka ego o nwere ma ọ bụghị, o ruo na nwoke anaghị eme ihe o kwesịrị ime dịka dibiụlọ, nsogbu na-adara ha. Niihi nsogbu a n'oge niile, alụkwaghịm na-abata tupu otu n'ime ha egbuo ibe ya. ọzọ, ụmụ nwaanyị ụfọdụ anaghị achọ ebe ha ga-ata nnukwu ahụhụ niihi na ụmụ nwaanyị na-aza Oriakụ n'ala Igbo. Otu nwoke nwunye ya hapụrụ laa be nna ya sịrị, "Enwere m ọtụtụ ego mgbe m lụrụ nwunye m mana ọgọdọ adịkwaghị ebe e kere ya, nwunye m wee kpọrọ otu nwaanyị ọ mụtara wee laa be nna ya. O teghị aka o zita ozi na ya achọghịzi." ọ bụ ezie na-ahụghị m nwunye ya jụọ ya ihe na-esere ha mana ụmụ nwaanyị ejighị ahụhụ anya isi ma ncha n'ụdị ọbụla.
(v) Alụmdi na nwata
Ịlụ di maọbụ nwunye na nwata na-ere isi abụọ niihi na ụfọdụ topụtazie ha achọpụta na ha enweghị ezi ịhụnanya n'ahụ onye ha lụrụ maọbụ onye lụrụ ha. ọ na-emekarị n'oge gboo mana obodo ụfọdụ na-eme ya n'oge a. N'oge gboo, nwatanwaanyị dị afọ iri na abụọ na-alụ dị mana o too o bido nyebe ma di ya ma ezinụụlọ ya nsogbu niihi alụghị onye o kwesịrị ịlụ. Mgbe ndị ọgbọ ya ndị nwoke ga-akọ ya ọnụ maọbụ na-eleda ya anya, obi ewee merụọ ya, ọ chọọ ịlaghachi be nna ya site na nke a gbaa di ya alụkwaghịm. Ihe na-ebutekarị ya bụ nkọcha ndị ọgbọ ya maọbụ ige asịrị mmadụ ụfọdụ na-agba.
(vi) Nnunye Nwata n'Alụmdi
Ihe ọzọ bụ nnunye nwata n'alụmdi nke ndị nne na nna ụfọdụ na-emegasị, tụmadụ n'oge nwata ahụ elubeghị ogo ịbanye n'ọkwa alụmdi. Ihe dị otu a bụ ihe na-emekarị n'oge gboo mana ndị oge ugbua agaghị agọnwu agụgọ ma ha menukwaa ihe dị otu a. Niihi enweghị ọnụ okwu ụfọdụ ndịntorobịa n'oge ahụ na n'oge ugbua bụ ndị nne na nna ha na-ahụtara nwaanyị niihi n'akụnụụba ha. ọ bụ ọrụ ndị mụtara ndịntorobịa a ikwu onye ha ga-alụ maọbụ onye ga-alụ ha. Ụfọdụ na-ekweta ma ha ejighị obi ha niile were mee nkweta, niihi ya ezi ịhụnanya anaghị adị n'alụmdi dị otu a. Ebe o were nwoke maọbụ nwaanyị anya na onye ọ na-alụ abụghị onye ọ hụrụ n'anya, ihe ọbụla nwoke maọbụ nwaanyị ahụ akwanyeere ya mere na-adị ya njọ.
Ụfọdụ ụmụ nwaanyị akwanyeere agadi nwoke ka ọ lụba ha oge ha di na nwata na-abụ ha tolite, ha aghara nwoke ahụ gbapụ laa be ha maọbụ gbalaa ebe dị anya. Ọzọ, ọ nọdebe okenye ahụ ọ na-emezi mpụ dị icheiche iji gosị na alụmdi ahụ amasịghị ya ma ncha.
(vii) Mbisa Di na Nwunye
Mmụta mere ka nwoke na nwaanyị mụta ma kwudoro onwe ya n'ihe ndị ahụ bụ oke ha dịka ndị obodo siri kwuo. Ha na-agụ ma mụta ihe ruru ha na ihe a tụwara anya ha ime. Nwoke maọbụ nwaanyị na-arụ ọrụ ebe dị icheiche wee hapụ onwe ha ogologo oge adịghị enyere ezinụụlọ aka ma ọlị. Kama ọ na-eme ka ha bido nyobe onwe ha enyo nke na-ebute alụkwaghịm. Otu nwoke sị na ihe ya jiri lụọ nwaanyị bụ ka ha bikọọ ọnụ dịka di na nwunye, ma rụọ ọrụ dịịrị ha dịka ndị nọ n'ọkwa ahụ.
(viii) E Nweghị Ezi Nledo Anya
Ọtụtụ ndị lụrụ di anaghị eledo onwe ha anya nke ọma dịka nwoke ịhapụ ọrụ dịịrị ya n'ebe nwunye ya nọ site n'ilezi ya anya nke ọma. ọ bụ ọrụ dịịrị nwoke ilekọta ihe ọ kpọrọ nke ya anya nke ọma ka o wee gosị na ọ bụ nke ya n'ezie. Otu ọkaikpe a gbara ajụjụ ọnụ kwuru na ọtụtụ mkpesa ha na-anata n'ụlọikpe bụ nwoke elezighị nwunye ya anya nkeọma. Ọtụtụ ndị nwunye n'otu aka ahụ anaghị elezi di ha anya nkeọma dịka a tụrụ anya n'aka ha.
(iụ) Amụtaghị Nwa
Nkewa a na-enweta n'ọtụtụ ezinụụlọ n'etiti di na nwunye n'oge gboo na n'oge a na-abụkarị nwaanyị amụtaghị nwa na be di ya. Ndị Igbo kwenyere na ihe nwoke ji alụ nwaanyị bụ ka ọ mụtara ya nwa tụmadị nwanwoke. Ndị Igbo ejighị ịmụta nwa eti epele maọbụ ha anaghị ekwukpo amụtaghị nwa okwu n'ezinụụlọ ha dum. Ha kwenyere na nwa dị ha ezigbo mkpa iji chekwaa ezinụụlọ ya. ọzọ bụ na nwa niile bụ nwa n'ala Igbo mana nwanwoke na-abụrụ ha oke ihe dị mkpa. Ndị Igbo nwere aha di ha ji ezipụta nkwenye a; Nwabụoke, Nwabugwu, Afamefuna, Nwakaego, Egokananwa, Obiefuna, Nwakọnobi, dgz. Ọtụtụ oge niihi amụtaghị nwa, obi anaghị eru ma nwoke ma nwaanyị nọ n'alụmdi ala ma karịsịa nwaanyị. A naghị ejikarị amụtaghị nwa enwe alụkwaghịm n'oge gboo niihi nwoke ga-alụrụ nwaanyị ọzọ mgbe ihe dịka afọ ise gachara. Ma niihi mmechibido mmụta na ụka n'ịlụ ọtụtụ nwaanyị ụfọdụ na-achụla nwunye ha lụrụ onye ga-amụta nwa.
Nwoke bụ aga maọbụ ufuru bụkwa ihe ọzọ na-ebute alụkwaghịm n'ala Igbo. Ọnọdụ nwoke dị otu a jọkarịrị njọ karịa nwaanyị amụtaghị nwa. Niihi ọnọdụ dị otu a nwunye ya nwere ike gakwuru nwoke ọzọ ọ mụnye ya nwa maọbụ ọ laa be nna ya lụrụ di ọzọ mụtaba nwa.
(ụ) Mmekpaahụ Ezinụụlọ
Mark 10:9 "... Ihe chukwu jikọtara ọnụ, mmadụ e kere eke ekewakwala ya." Nne na nna ụfọdụ na-etinyere alụmdi ụmụ ha anya n'ụzọ jọrọ njọ imegide otu n'ime ha, di maọbụ nwunye. Ọgọ nwoke maọbụ ọgọ nwaanyị na-eso etisa ezinụụlọ ụmụ ha, mgbe ha na-achọ ka ọ bụrụ izu ha ka a ga-eme n'ezinụụlọ dị otu a. Di na nwunye ọbụla kwesịrị ka e nye ha ohere ka ha lụọ di na nwunye ha ka ha siri chọọ niihi na onye nke atọ bata n'etiti ha o butere ha nsogbu ga-eweta alụkwaghịm.
Nwoke nwere ike bụrụ onye na-eti nwunye ya ihe oge ọbụla, ha na-ewere nwunye ha dịka ohu maọbụ anụ ụlọ a na-azụ azụ. Ha tibe nwunye ha ihe ha echezọọ na ọ bụ ha abụọ nwe ụlọ, mgbe ụfọdụ ọ bụrụ n'ihu ụmụ ha na n'ihu ndị agbataobi. Ma n'ụlọikpe ma n'omenaala Igbo nwaanyị ọbụla chọrọ alụkwaghịm niihi iti ihe anaghị agbagha ya agbagha makana oke iti ihe nwere ike ibute ọnwụ nwoke maọbụ nke nwaanyị. E tigbughị nwaanyị, nwaanyị e were akaodo kugbuo di ya.
Usoro e si agba alụkwaghịm n'ala Igbo
Ndị Igbo anaghị ahụta alụkwaghịm dịka ezigbo ihe, ọbụladị mgbe ndị nọ n'alụmdi na-ata ahụhụ onye ọbụla hụrụ anya. Mgbe nwoke na nwaanyị lụrụ di na nwunye nọkatara chọwa ịgba alụkwaghịm ndị mmadụ na-amalite ịjụ ase ihe butere nsogbu kpatara ha jiri chọọ ịgba alụkwaghịm.
Ọ bụrụ na nwoke na-alụ nwaanyị nọkata kwuo na ọ chọghịzi ịlụ, ọ ga-ebu ụzọ gwa ụmụnna ya, ezinụụlọ ya na ezinụụlọ ndị ọgọ ya. Ezinụụlọ abụọ a ga-adị n'alo zigara onyeakaebe ozi, ha niile ga-anọkọ wee kpọọ di na nwunye ahụ mata nsogbu ha ma gbaa mbọ idoziri ha ka ha wee birikwa. Ma ọ bụrụ na esemookwu ahụ ekweghị ndozi, nwaanyị ahụ ga-ala be nna ya ma hapụrụ nwoke ahụ ụmụ niile ọ mụtaara ya. N'ebe e nwere nwa nwaanyị ahụ ku n'aka na-aṅụ ara ọ ga-akpọrọ ya wee laa, hapụzịa ndị tolitere wee ruo oge nwata ahụ tolitere ọ kpọgara ya nna ya. Niihi nkwenye ndị Igbo na nwata eku n'aka anaghị anọ ndụ ma ekewaa ya na nne ya, nwaanyị ahụ ga-eledo nwa ya anya nkeọma n'oge ọ dị na nwata.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ nwaanyị ka alụmdi ahụ juru afọ, ọ ga-eje gwakwa ndị ụmụnna ya na onyeakaebe ihe na-eme. Ndị ezinụụlọ nke nwaanyị ga-ezigara ndị ọgọ ha ozi maka ihe nwa ha kwuru, ezinụụlọ abụọ ahụ ga-agba mbọ ịhụ na udo laghachiri n'etiti ha, mana ọ bụrụ na nke a emeghị, nwaanyị ga-ekposara di ya ụmụaka wee laa be nna ya. Dịka omenaala Igbo siri dị, anaghị akwụghachi ego e mere n'si nwaanyị ahụ wee ruo mgbe ọ lụrụ di ọzọ, nke a na-adịkarị ire n'ebe nwaanyị ahụ ka bụ agbọghọbịịa mana ọ bụrụ onye kara nka ụmụ ya tollite ha na-aga kpọlata nne ha. ọ bụ onyeakaebe ga-echeta ego e mere n'isi nwaanyị kpọmkwem ma bụrụkwa ya ga-akwụghachi ego ahụ ma ọ chọọ.
Dịka n'ọzụbụlụ, Nnụbịa C.S. (2011) na-asị na Mgbe nwaanyị lụrụ di ma maa ọgọdọ dịka ọzụbụlụ si akpọ Ịgbankwụ ha, chọrọ ịlụ di ọzọ ọ gaghị amakwa ọgọdọ ahụ ọzọ niihi na ọ maala ya mbụ kama ọ bụ ego ka di nke abụọ ahụ ga-emezi n'isi ya. Oge a kwụchara ego e mere n'isi nwaanyị ọ lụọ di ọzọ, otu ọnwa gaa, ezinụụlọ abụọ ahụ ụmụ ha na-alụbu onwe ha ga-abịa, ka a tulee ihe nwoke ahụ gooro nwunye ya oge ọ na-alụ ya. ọ bụrụ ihe ndị dịka akwa, akpati, akpụkpụụkwụ, na ihe ndị ọzọga, nwaanyị ga-eburu ya bughachi be nwoke n'ihu ndị ụlọ abụọ ahụ. Nwoke nwere ike hapụrụ ya ihe ndị ahụ tụmadụ ọ bụrụ na ọ mụtaara ya ụmụ. Ma ọ chọghị o bukọrọ ihe ndị ahụ niile, nke a mechaa a mata na aka ya apụọla ebe nwaanyị ahụ nọ kpamkpam.
N'oge gboo, nwoke enweghị ike iji aka ya chụlaa nwunye ya. Mana ọ bụrụ nwaanyị na-akpa ajọ agwa nke mere na di chọrọ ịkpọlagara ya ndị nwe ya. ọ ga-ebido n'oge ahụ na-emeso nwaanyị ahụ omume ọma ihe dịka izu abụọ maọbụ atọ, o ruo otu ụbọchị, ọ ga-asị ya ka ha jee hụ ndị ọgọ ya, ọ ga-eburu ite mmanya ngwọ abụọ ma zokwaa akwụkwọ ube o tinyere n'akpa ya ezoo ka nwunye ya ghara ịhụ ya. O ruo na be nna nwunye ya dọba ite mmanya ahụ, kwupee ebe ahụ ọ fonyere akwụkwọ ube ahụ tinye n'ọnụ ite mmanya ahụ. Akwụkwọ ube ahụ pụtara "ube be n'oke". Nke bụ na alụmdi ahụ ebiela n'enweghị mmekwata ọzọ.
Mgbanwe batara n'usoro alụkwaghịm n'oge a
Ugbua nwoke nwere ike jiri aka ya dulaa nwunye ya ma kwechie na ya agaghị alụzi ya. Ndi be nke nwaanyị nwere ike kpọọ ya ka ha nụrụ olu okwu gbasara nsogbu dapụtaranụ, ọ gaghị aza oku ahụ.
N'otu aka ahụ nwaanyị nwere ike n'oge a, kpọkọọ ụmụ niile ọ mụtara gbafuo ma jụ di ya. Ya na ụmụ ya ebiri. ọ gaghị enye oghere ka ekpeziere ya na nwoke ahụ.
N'oge a, nwoke na-achụla nwunye ya maọbụ na nwunye ya na-ahapụ ya laa be nna ya maọbụ ebe ọzọ masịrị ya. Nwoke ahụ na-agwa ndị ọgọ ka ha wepụtara ya ego ya mere n'isi nwaanyị n'otu ebe ka ọ bịa weghara ya n'akpọghịzi onye akaebe ka o mee ya. Ndị be nke nwaanyị n'otu aka ahụ nwere ike kpọọ nwoke ka ọ bịa were ego ya.
N'oge a, ụfọdụ anaghị enwezi onye akaebe ma ya fọdụzịa ịkpọ ya ma ha nwee nsogbu. Ha anaghị akpọ ha ka e doziere ha okwu dapụtara n'etiti ha. Mgbe ụfọdụ onye akaebe na-anụ n'ezi na di na nwunye ahụ agbaala alụkwaghịm.
Na nchịkọta, alụkwaghịm dị ọtụtụ n'oge a karịa n'oge gboo. ọtụtụ ihe kpatara ya bụ ndị a: awamaanya, ekwesịghị ntụkwasị obi, na mmepe ndị bekee wetaara ndị Igbo. Mmepe ahụ bụkwa ọtụtụ ihe were bịa nke mere ka ndị Igbo malite ịgbaso etu ndị bekee si eme alụmdi na alụkwaghịm n'echemighị echiche ime.
Nwaanyị Dịka Osisi na-Ebu Apa Mma Alụkwaghịm
Nwaanyị bụ osisi na-ebu apa mma ma e nwee alụkwaghịm, ọ bụ ya ka a na-akpụ n'ọnụ n'alụkwaghịm maọbụ di ya maọbụ ya ka alụmdi ahụ juru afọ. A na-agba mbọ ajụ ajụjụ ụfọdụ: Gịnị mere o jighị dibe ihe di ya na-eme ya? Gịnị mere o jighị rubere di ya isi ka ọ ghara ịchụla ya? Ndị Igbo kwenyere na nwaanyị kwesịrị igbochi alụkwaghịm n'ụdị ọbụla. Mana kama e zughị ike na obi erughị ala ga-ebutere di na nwunye maọbụ otu n'ime ha ọbara mgbalielu nke na-eweta ọnwụ ike, ọ ka mma na di na nwunye nwere ụdị nsogbu a kewaa, ka ha dị ndụ ma tọọ atọọ.
Anyị ga-eleba anya n'isiokwu ndị a iji kwado nwaanyị dịka osisi na-ebu apa mma n'alụkwaghịm:
(i) ọzụzụ nwa
(iii) Mkparị / Nleda anya
(iv) Ịkpọasị na Mmegide
(v) Mkpa ego
(vi) Ịma ikpe / nkwutọ
(viii) Ịta ahụhụ / Ịgbaoke mbọ
Ọzụzụ nwa bụ ihe kwesịrị ịdịrị nne na nna dịka ọrụ ha n'ebe ụmụ ha niile nọ. Ọtụtụ mgbe ka ndị nne na-egbochi nna ha ịpịa ha ụtarị niihi mmmetụta n'ebe nwata ahụ nọ. ọ bụghị na ha na-akwado ihe ọjọọ butere ntaramaahụhụ ahụ nna chọrọ inye nwa ya kama ọ bụ n'ụdị chi siri kee ndị nne. N'ebe e nwere ọnọdụ alụkwaghịm, nna nwere ike iji ụtarị wee merụọ ụmụaka a haara ya ahụ niihi obi ọkụ maọbụ nkwanye nwunye ọhụụ ya kwanyere ya. ọzọ bụ na ndị Igbo sị na asị a kpọrọ nne na-efe nwa ya, nna ha ga-ahụta ụmụ ndị ahụ dịka nsogbu nye ya niihi anọghị nso nne ha. Oge niile ihe ga-apụ ya n'ọnụ bụ ụmụ ajọ nwaanyị hụpụrụ wee laa bịara ịwa m isi. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na nne na ụmụ ya nọrọ niihi alụkwaghịm, nne anaghị enwe obi ike imesi nwata anaghị akpa ezi agwa ike nke ga-eme ka agwa nwata ahụ ghara ịdị mma. Nke a ga-eme ka ndị ogbe maọbụ obodo na-atụ ilu na nkịta nwaanyị zụrụ na-ata akwa. N'iji zipụta na nwaanyị amaghị azụ nwa. Agwa ọma ọbụla nwata kpara bụ nke si ebe nna ya mana agwa ọjọọ ya bụ n'ọbara nne ya ka o si banye nwa n'ahụ. Na ọ bụrụ na ọbụghị ọnọdụ nwaanyị ahụ na ụmụ ya ga-abụ ndị e ji ezi omume were mara n'obodo.
Mbigharị bụ mgbe nwoke maọbụ nwaanyị bikatara ka di na nwunye bịa biwa ka nwoke maọbụ nwaanyị enweghị nwunye maọbụ di. Nke ka njọ bụ nwaanyị zakata aha di, mechaa zawa aha nna ya. ọ bụ ihe ihere n'ebe nwaanyị nọ. ọnọdụ a nwere ike mee ka nwaanyị kwapụ gaa ebe dị anya ka o wee nwere onwe n'etiti ndị amaghị ya. Mana nwoke nnwere ike buru akpa na-aga azụta ihe nri ka ụmụ nwaanyị si aga azụta niihi na ọ bụrụ na ọ zụtaghị, ọ gaghị enwe onye ga-azụtara ya. Ma nwoke ma nwaanyị ọbụla hụrụ ya n'ahịa na-atụnyere nwunye ya okwu na ọ bụ niihi alụkwaghịm mere nwoke ahụ ji ata ahụhụ dịka ha siri hụta ya.
Nwaanyị ọbụla gbara alụkwaghịm biiri onwe ya na-anata nnukwu mkparị na nleda anya n'ebe ndị mmadụ nọ, a na-elegara ya anya ka nwaanyị ọha nke ewu na ọkụkọ na-etinyere ọnụ. Ndị mmadụ na-elekwasị ya anya ka onye agwa ọjọọ. A naghị akpọ ya n'ọgbakọ ebe a na-edozi okwu ezinụụlọ. A naghị enye ya ohere ikwu okwu n'ọgbakọ dị mkpa.
Ikpọasị na mmegide na-adị n'etiti ọgọ na ọgọ, enyi na enyi na nwanne na nwanne. Ndị be nke nwoke na-egosịpụta na ọ bụ site n'aka ndị a ka ha siri lụta ajọ nwaanyị edofọghị ha ahụ. Ụfọdụ oge ụmụaka na-eso nna ha kpọọ nne ha asị mgbe e duhiere ha mmegide nne ha.
Mmegide a na-emegide nwaanyị a gbara alụkwaghịm maọbụ gbara di ya alụkwaghịm na-abụkarị site n'aka ndị ada nne nke nwoke. ọ bụrụ na ụmụ ya ka dị na nwata ọ kpọkọrọ ha bido gwaba ha ọtụtụ ihe ọjọọ megide nne ha, nke mere ka ha kpọọ ya asị. Ma ọ bụrụ na ha etolitela tupu nke a emee ha ga-eji aka ha chọpụta ebe mmiri siri banye n'opi ụgbọgụrụ.
Mkpa ego na-eme ka nwaanyị a gbara alụkwaghịm bido gagharịwa ezi n'ụzọ were ahụ ya na-akpa ego. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ n'ụdị ka o were nweta ego o ji edozi onwe ya maọbụ azụ ụmụaka di ya hapụụrụ ya, site na nke a na-akụziri ụmụ ya ihe ọjọọ maọbụ agwa ọjọọ, na-eme ka imerụ iwu nke isii bawanye (ọpụpụ 20:14) nke kwuru "Gị akwala iko".
Nwaanyị ọbụla lara n'ụlọ nna ya ka ọ lụchara di ma ọ mụtara nwa ma ọ mụtaghị, a na-ama ya ikpe oge niile maọbụ na-ekwutọ ya niihi ọnọdụ ya. Nne ya nwere ike gwa ya okwu ọjọọ n'ụdị biko anọkwa m be m, ị gaala lọta chọwa onye ị ga-awa isi n'ụlọ a, maọbụ ọ bụ ihe dị otu a ka I mere ha wee chụlata gị be nna gị. Nna ya n'otu aka ahụ nwere ike gwa ya okwu ọjọọ ga-agbawa ya obi. Ndị ezinụụlọ, ikwunaibe, ụmụnne na-ama nwaanyị ahụ ikpe ma kwutọọ ya mgbe ọbụla ha na ya nwere obere nsogbu. Ndi be di ya na ndị nwunyeedi ya nwere ike na-emekwa otu ahụ ka a ga-asị na nwaanyị ahụ mere arụ ka arụ n'obodo ha. Ha na-asịkarị ya ihe dị otu a: ọ bụrụgodu na di ya mere ihe ahụ, ọ bụkwanụ maka ya ka ọ ga-eji gbaa alụkwaghịm? Onye ka ọ hapụụrụ ụmụaka ka ọ zụọrọ ya? ọ lọtara ka ọ gagharịwa ezi n'ụzọ chọba ihe achọghị ya. Ha nwere ike tụọrọ ya ilu, nwatanwaanyị ju ndo, ọ nyawa anwụ.
A na-eji nwaanyị a gbara alụkwaghịm ama atụ oge niile. E ji ya adụ mmadụ ọdụ maọbụ were ya kọọ mmadụ ọnụ. E nwere ike jiri ya maara nwoke anaghị emezi nwunye ya atụ, "Ihe a ka ọkafọ mere Chinwe ọ ghara ya laa be nna ya." Maọbụ nwaanyị "A sị gị hapụ okwu ahụ ka ọ ghara ịdị gị etu ọ dị Chinwe lọtara n'afọ gara aga." A na-ejikarị ha ama ajọ atụ iji zipụta etu ọhanaeze si agbarụ ihu n'ebe alụkwaghịm dị n'ala Igbo karịsịa n'ebe nwaanyị nọ.
Nwaanyị nọọrọ onwe ya na-agba oke mbọ dịka nwoke, nke a anaghị atọ ya ụtọ niihi na ọ bụ ahụhụ ka ọ na-ata. ọ na-akpata ego nri ma na-azụ ụmụ ya n'akwụkwọ. ọ bụrụ onye dị uchu na mbụ ọ ga-agbawanye mbọ ka ihe mmadụ abụọ narị enweta bụzi naanị ya ka a na-atụ anya inweta ya. Naanị ma nwaanyị ahụ enwere ezigbo ọrụ na-enye ya ego ọ na-arụ, emeghị etu ahụ ụfọdụ na-apụ ezi n'ụzọ iji mejuo akpa ha ka nri ghara ịkọ ha n'ụlọ. Ahụhụ anaghị adị nwaanyị ahụ mma n'obi mana o nweghị ihe ọ ga-emere onwe n'abụghị ịta ahụhụ n'ụdị a.
Ihe a ghaghị ime wee gbochie ọnụọgụ alụkwaghịm
ọ dị mkpa n'ezie ka ndị ọbụla chọrọ ịbanye n'ọkwa alụmdi mata na alụmdi dịka nkwụelu kara aka nke na-abụ ọ tọkata ụtọ o luwe ilu. Anyị ga-eleba anya na ndụmọdụ ndị a iji belata ọnụọgụ alụkwaghịm n'etiti anyị n'oge a.
- Itozu etozu Oge ọmụmụ onwe ha Mmgbanwe ajọ omume Nlekọta otu n'ime ha nwere nsogbu Obi umeala Ikute nwa Mbikọ di na nwunye n'otu ebe na ịrụsị ọrụ ike
Tupu nwoke maọbụ nwaanyị a chọwa ịlụ di na nwunye, ha kwesịrị itoru ogo ya. Nwoke ga-eru ihe dịka afọ iri abụọ na ise ebe nke nwaanyị kwesịrị iru ihe dịka afọ iri abụọ. Nke a ga-enyere ha aka ime ihe nwere ike ịdapụta n'ezinụụlọ n'akpọghị onye abụọ maọbụ atọ bịa nyere ha aka be ha.
Ndị chọrọ alụmdi kwesịrị inye onwe ha oge ọmụmụ onwe ga-adị n'etiti ha ihe dịka ọnwa isii ma opeka mpe. Ha ga-eji ohere a mụọ onwe ha na ihe gbasara obibi ezinụụlọ, ha nwere ike na-aga nkuzi gbasara ya n'ụlọụka maọbụ ebe ọzọ a na-eme ụdị nkuzi ahụ. ọtụtụ ndịntorobịa na-abanye n'alụmdi na-enwe oke olileanya na obi mpako maka ihe ha na-atụ anya ya n'alụmdi. Mgbe ollileanya ha emezughị, nsogbu amalite n'ihu na n'azụ. Nke a bụ ka di na nwunye ghara ịdị na-enwe oke olileanya eluigwe na ala ga-emere ha n'ezinụụlọ nke alụmdi ha maka na ọ bụghị ka e siri chee ka ihe ụwa si adị.
O kwesịrị ka ọ bụrụ mmadụ abụọ ndị ahụ chọrọ ịlụ onwe ha ji aka ha wee chọta ma mee mkpebi alụmdi ha ka ezinụụlọ lepụrụ ha anya ma dụọ ha ọdụ kwesịrịnụ mgbe ha na-eme nke a. ọ gaghị abụ iwu bụ onye ezinụụlọ chọtara ka otu n'ime ha ga-alụ. Ha were aka ha mee nke a, ọ ga-ara ahụ ka ha see okwu ma ya fọdụzịa ịgba alụkwaghịm.
Nwoke na-eti nwunye ya ihe maara nkeọma na oge adịghị anya ahụ fụwa nwaanyaị ahụ ụfụ, ọ chọwa ụzọ be nna ya. O zighị ezi nnwoke iti nwunye ya ihe niihiina ọkpụkpụ nwoke na nwaanyị abụghị otu. ọzọ, nwaanyị a na-eti ihe n'alụmdi, obi anaghị eru ya ala. O nwere ike bido na-emezi omume ka nwata. ọ bụghị ka aka ha ka a na-eti nwa,, ọzọ nwaanyị alụtara abụghị nwata a na-eti ihe etu ọ masịrị di ya. E were obi ọkụ e tikpọ nnwaanyị anya maọbụ tinye ya ọrịa n'ahụ, nke ụfọdụ na-arịa wee nwụọ. Nwaanyị a na-eti ihe na-agba ọsọ ndụ ya ma bie ya na be nna ya. Di kwesịrị ịhụ nwunye ya n'anya n'agbanyeghị amaghị eme ya niihi na, e metuo obi, a mụta nwa dị mma. ụfọdụ ezinụụlọ na-eji aka ha bịa kpọrọ nwa ha na ndụ tupu di ya etigbuo ya.
Ma nwoke ma nwaanyị kwesịrị ịkwụsị kpamkpam ajọ omume ha na-eme tupu ha alụwa di na nwunye. Agwa ọjọọ dịka: izu ohi, ịgba ama asị, ịlụ ọgụ, ịkụ asịrị na ịgba n'ezi n'ụdị ọbụla. ọ dị mma ka di na nwunye na-emebu otu maọbụ abụọ n'ime ajọ omume ndị a bie ya ozigbo ọ lụtara onye ya na ya ga-ebi. Ha ga-akpachara anya ka ha ghara ibute ọrịa ga-eme ha ọ dị ndụ ọnwụ ka mma nke ga-eme ka otu n'ime ha jụ onye nke ọzọ wee kịebie ịgba alụkwaghịm.
Ụfọdụ ndị nọ n'alụmdi anaghị enwe ndidi mgbe ihe mberede dapụtara n'ezinụụlọ ha. ọ bụrụ na ihe mberede dịka ara, ọrịa dị aṅaa dịka nke ihe mberede okporoụzọ wetara. Ha ga-agbali etu e nwere ike gwọọ onye nke ọzọ n'ụlọọgwụ. ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ịgba onye hụtara onwe ya n'ọnọdụ a alụkwaghịm. Ha ga-enwere ibe ha ndidi ka o wee site n'ọnọdụ ọjọọ ahụ pụta.
Ọtụtụ ụmụ nwaanyị anaghị enwezi obi umeala n'ebe di ha nọ karịsịa nwaanyị di ya hụrụ n'anya nke ukwu. Nwaanyị di ya kpọrọ asị maọbụ na-eleda anya nọrị agba mbọ inweta ihu di ya ma fọdụzịa inwere ya obi erughị ala. Ma di ma nwaanyị ga-asọpụrụ ibe ha n'ịhụnanya ka udo wee chịa n'ụlọ ha. Nwoke ga-agbasi mbọ ike ịhụ na ọ na-arụsi ọrụ ya ike dịka Igbo mkpa ego n'ụlọ ya ka ugwu ya wee zuoro ya oke.
Nwoke ọbụla nwere ọnwụnwa amụtaghị nwa ekwwesịghị ịchụla nwunye ya niihi na ọ naghị atọ nwaanyị ahụ ụtọ na ọ mụtaghị nwa. Ha kwesịrị ịdị na-alo gaa ebe a na-eduta nwa, duru ole ha chọrọ ma zụọ ha nke ọma. Mgbe gboo ha na-enyere ibe ha aka ịmụta nwa mana ọ dịghịzi etu ahụ ugbua, nwaanyị amụtaghị nwa n'oge a ga-ejikọta onwe ya. Ma ọtụtụ afọ ga na-agakwa, ha ga-atụkọ alọ ọnụ lụta nwaanyị ọzọ maọbụ dute nwa ebe ndị ọzọ na-edute nke ziri ezi n'iwu na-achị ala anyị. Alo dị otu a agaghị eweta esemookwu n'ezinụụlọ.
Nke ọzọ bụ mgbe nwoke hapụrụ nwunye ya na ezinụụlọ ya ogologo oge, gaa obodo tere aka biri na-arụ ọrụ bekee maọbụ na-azụ ahịa. Ndị nọ ebe tere aka ga-agba mbọ na-abịarụ ụlọ kwa izuụka na-eleta ezinụụlọ ha. ọ karịa ya kpọrọ ezinụụlọ ya biri n'ebe o bi niihi na o bighị be mmụọ, ndị mmadụ bikwa n'ebe ahụ. Mgbahapụ dị etua na-ebutere ma nwoke ma nwaanyị ịgba n'ezi ma ha chọọ, nke nwere ike iwete alụkwaghịm.
Ọzọ kwa, oke ụbịam na-ebute alụkwaghịm. Ụbịam anaghị edefọ nwoke dara ụbịam ahụ ma ya fọdụzịa nwaanyị bịara ịza oriakụ na be nwoke. Nwoke ga-alụ nwaanyị ga-eleda anya ala chọta onye hụrụ ya na ọnọdụ ya n'anya ma kobe aka alụmnwaanyị n'ogo aka ya ga-eru. Nwoke kwesịrị ịbụ onye na-agba mbọ na-arụsi ọrụ ya ike ịchọta ihe ya na ezinụụlọ ya ga-eri n'ụbọchịị ọbụla. Nwaanyị n'otu aka ahụ ga-enye aka na-azụ ezinụụlọ ya nri mgbe o kwesịrị, nke a ga-eme ka e nwee ezi ịhụnaanya n'ezinụụlọ ahụ.
A chọpụtara na ịgba alụkwaghịm keogeugbua dị ọtụtụ karịa ka ọ dị n'oge gboo. Ndị gboo anaghị anabata ya kama ọ bụrụzịa n'alụmdi ahụ na-achọzi iri isi mmadụ, e kesaa ha ka ndụ wee fọdụ. A hụrụ ọrụ onye akaebe n'ịgba alụkwaghịm n'oge gboo mana n'oge a. Onye akaebe nwere ike ọ gaghị ama na-ekewaala kama ọ nụzịa ya n'ezi.
A chọpụtara n'alụkwaghịm nwere uru na ọghọm dị na ya. Mana ọtụtụ ihe ọjọọ dị na ya karịrị akarị dịka; ọnọdụ ụmụaka, ọnọdụ nwaanyị na ọnọdụ nwoke. Onye ọbụla ketara oke ọjọọ n'ime ya.
A hụtara ụmụ nwaanyị dịka osisi na-ebu apa mma mgbe a gbachara alụkwaghịm. N'ụzọ dị otu a, ọzụzụ nwa, mbigharị, mkparị/nleda anya, ịkpọasị/mmegide, mkpa ego, ịma ikpe / nkwutọ, ejiamaatụ na ịtaahụhụ ịgba oke mbọ bụcha ahụhụ na-adapụtara nwaanyị nọ n'alụkwaghịm.
A chọpụtara ihe na-akpata alụkwaghịm n'ala Igbo gụnyere; izu ohi, ịkpa nsi, ịwị ara, ụkọ ego, alụmdi na nwata, nnunye nwata n'alụmdi, oke mmụta, enweghị ezi nledo anya, amụtaghị nwa, mmekpaahụ ezinụụlọ.
A gbara n'anwụ usoro e si agba alụkwaghịm n'oge gboo na n'oge a. e nwekwara mgbanwe ndị a rụtụrụ aka ma kọwasịa ha nke ọma.
A chọpụtara ma kọwaa n'uju ihe agaghị ime ka e wee belata ọnụọgụ alụkwaghịm n'oge a, gụnyere: itozu etozu, inwe oge ọmụmụ onwe, ndị ga-alụ iji aka ha chọta onwe ha, ezi nlekọta onye ejighị ahụ, mgbanwe ajọ omume mebe ezi omume, iti nwaanyị ihe ekwesịghị n'alụmdi, mbikọ ndị lụrụ di n'otu ebe, ikute nwa na irusi ọrụ ike.
Alụmdi adịghị mfe kama site n'obi umeala n'etiti ndị lụrụ di na nwunye nsogbu alụkwaghịm agaghị adapụtara ha, ha ga-amata na ka ọ dị be oke ka ọ dị be ọgịnị. Ha ga-ewetuo obi ala chọọ ihe danyeere ha na mmiri wepụ ya ma na-ebi n'udo.
Ndị nne na nna ga-ahapụ ụmụ ha ka ha lụọ ndị ha hụrụ n'anya ma wepụrụ ha anya na-etu ha si ebi mgbe ọ naghị esere ha okwu. Ndị ọgọ ga-enye di na nwunye efe ka ha lụọ etu ha siri hụta ma mụta mgbe ha enweghị nsogbu na etu ha si alụ ya.
Alụmdi ga-ekwesị n'etiti ndị tozuru etozu ịlụ onwe ha. Ezinụụlọ ga-agba mbọ zụlite ụmụ maara ihe, na-asọpụrụ ibe ha ndị ga-emechaa lụta di maọbụ nwunye ma na-enye ibe ha nsọpụrụ n'ozuzu oke mgbe ha biiri dịka di na nwunye.
Odee chọrọ iji ajụjụ olenaole wee mechie edemede a. Maka ndị ịgba alụkwaghịm na-anụ ọkụ n'obi.
(i) Olee ihe chere m n'ihu ma m gbachaa alụkwaghịm? M ga-emenwu ihe ga-adapụtara m n'oge ahụ?
(ii) ọ bụrụ na m lụọ nwaanyị maọbụ di ọzọ, amụtara m ihe ga-eme ka alụmdi ọhụụ ka nke ochie mma?
(iii) E nwere ihe ọma dịrịị na nke a m chọrọ ịhapụ wee gaa bidowe ọzọ? Gịnị gbara m ume na nke ọhụụ ga-akachasị mma?
(iv) Ihe m jiri chọọ ịpụ n'alụmdi a, e nwere ike igbochi ya?
Ajụjụ ndị a ga-enyere ma nwoke ma nwaanyị aka iji mee ezi mkpebi maka alụkwaghịm niihi na enweghị ebe e gburu aja, ụzọ owere adịghị. ọzọ bụ na ọ bụrụ ọnọdụ na-achọ iri isi nwoke maọbụ nwaanyị a ga-agba mbọ mee mbisa ozigbo tupu e kwube okwu alụkwaghịm.
Brainy, ọ. (2011). Book rags media network: Internet.
Ezeuko, R.O. (1986), Ewumewu, Omenala, Ofufe na nkwenye ndị Igbo. Onitsha: Etukokwu.
King James (KJV) (2004). Holy Bible, Belarus: World Wide Printing.
Landis, H.P. (1977). Your marriage and family living. London: Mc Graw-Hill.
Nnụbịa, S.C. (2011) Ịgba alụkwaghịm n'ọzụbụlụ: a project for the Department of Igbo Language Culture, Anambra State University, Igbariam Campus. Dec. 2011.
Ọgbalụ, F.C. (1974). Omenaala Igbo. Onitsha: University Press.
______ (1981). Ndụ ndị Igbo. Onitsha. University Press.